Imiyalezo ye-CEO - iDrotrong Chinese Herbs Biotech Co., Ltd.
Wamkelekile kwiwebhusayithi yeDrotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. Enkosi ngenkxaso yakho kunye nenkxaso yakho. Ndingathanda ukuvakalisa uluvo lwam olusisigxina kuwe egameni loogxa bethu.
Ukusukela ngo-1995, iDrotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. ibisebenza ekwakheni ishishini elipheleleyo lamayeza amaTshayina, kubandakanya izityalo zaseTshayina izithole, ukutyala, ukuqhubekeka okuphambili, ukuqhubekeka okunzulu, ukukhutshwa kwamayeza kunye nokuthengisa. sihlala sibambelela kumgaqo "wokuphuhlisa amashishini, ukuqonda intsebenzo yokuphumelela, ukwenza igalelo kuluntu nakubantu". Siyazibophelela ekuphuhliseni ishishini lethu lezamayeza amaTshayina ngesayensi, ngenkuthalo, ngobuchule nangokuziphatha okungqongqo.
Okwangoku, besibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kwimizi-mveliso yamayeza eyaziwayo, abavelisi bezithambiso, kunye nakwimizi-mveliso yokukhupha izityalo kumakhaya nakwamanye amazwe, kwaye siphumelele ukuthembela kunye nendumiso evela kubathengi bethu. Siyayazi indlela yokuhlangabezana neemfuno zentengiso kwaye sinentembelo yokwenza isisombululo esigqwesileyo kwaye siqinisekise ukuba izisombululo zethu zisebenza ngokupheleleyo, zisebenza ngokufanelekileyo kwaye zihlala ziguquguqukayo ngalo lonke ixesha.
Kule minyaka ingama-25 idlulileyo, besisoloko sithatha uxanduva lwethu kwezentlalo. Olu lukhetho olungenakuphepheka ukufezekisa uphuhliso oluzinzileyo. Sihlala sisukela iimveliso ezikumgangatho ophezulu, itekhnoloji ephezulu kunye neetalente zobungcali. Kweli xesha litsha, siza kuthi siphonononge kwaye sitshintshe imo yeshishini, sigcine izinto ezintsha kwaye senze inkqubela phambili yokuqonda uphuhliso oluzinzileyo. Siza kwenza igalelo lethu kuphuhliso lwamashishini amayeza kunye nempilo yabantu.
Ndiyathemba ngokuqinisekileyo ukuba kunye nabathengi bethu abatsha nabadala, masenze ikamva elingcono kunye!